Umuntu wangaphambili: indlela yokuziphatha naye: iseluleko somqondo wezengqondo. Indlela yokuziphatha nomuntu owayengumthandi wangaphambili
Ngesikhathi esidlule esiqongweni somnyango: indlela yokuziphatha nomuntu wangaphambili
Indlela yokuziphatha nomuntu owayengumfana noma indoda
Owesifazane ngamunye uneqhinga lakhe lokuziphatha namadoda angaphambili. Abanye bakhetha ukugcina ubuhlobo obuhle, abanye balandela isimiso "ngaphandle kokubona, ngaphandle kwengqondo". Kunzima: uma umuntu wangaphambili ehlangene naye usebenza naye noma, isibonelo, umngane omuhle womngane wakho omkhulu. Ngamagama: uma ngisho nangemva kwekhefu kufanele ukhulume naye. Kulesi sihloko, sizokhuluma ngeqhinga lokuziphatha nabathandekayo bokuqala.
Imithetho yendlela yokuziphatha nomuntu wangaphambili
Izikhala zihlukile. Bakuphonsa wena noma wena ngokwakho ufuna ukuqeda ubuhlobo - ukuhlala okungajabulisi kuyohlala noma kunjalo. Owesifazane ozihloniphayo akufanele neze abonise abanye ukuthi yini embi kuye. Uma usebenza nomuntu wangaphambili eqenjini elifanayo, ulungiselele ukuthi uzofuna ukuzisola nokududuza ngamazwi "wonke ama-poasant goats". Ungazivumeli uzilahle, ngisho nangezikhathi ezinjalo. Ngoba wonke amazwi akho kanye nezikhalazo ngawe wangaphambili angabeka imali yakhe ezindlebeni zakhe. Zama ukwelapha ukuphuka kwefilosofi: ubuhle, kodwa akukho nethuba lobuhlobo.
Uma uhlephula nabangani, tshela abangane bakho ngakho. Intombazane ephumelelayo neyethembayo ayidingi isihawu nesihe. Vumela ababukeli beqembu lesithathu babe nomuzwa wokuthi uzizwa ukhululekile futhi ulungele abajwayele abasha. Ngisho noma ungakakulungeli okwamanje, ungaziniki isikhathi esiningi ekuzihloliseni ngokwengqondo. Vumela ukuhamba phambili, udlale umuzwa omuhle kuze kube yilapho ithemba nokucabanga okuhle kubuya kuwe. Ukhombisa umuntu wakho wangaphambili ukuthi naphezu kwakho konke oqhubeka ukuhlala futhi ujabulele nsuku zonke.
Inhlonipho ibangelwa kuphela labo bantu abahlala beqinisile emazwini abo. Okufanayo kuya ebuhlotsheni. Uma utshele igama lokugcina futhi isinqumo sokuqeda ubuhlobo kwakuyisinyathelo sakho - sinamathela kuso. Khumbula ngenxa yalokho okhethile ukushiya ngaphambi kokuthi ubize owokuqala noma ukumomotheka ngokuqondile njengoba kwenzeka esikhathini esidala.
Futhi ngaphezu kwalokho ungazami ukuqalisa ubuhlobo uma u-initiator wegebe wayengumuntu. Mhlawumbe ubuhlobo bakho buvele bukhulu, futhi isizungu ozwayo manje sizodlula emavikini ambalwa. Ucwaningo lwesigamu sabantu besilisa lubonise ukuthi aluwuthandi uma ukukhathazeka kwangaphambili kuboshwe entanyeni.
Isiphetho: asitholakali. Yiba nomusa, ungawahlukanisi nabanye - lokhu kuyindlela engcono kakhulu yokuziphatha ngemuva kokuhlukanisa.
Ungacacisi ubuhlobo nomuntu owayengumthandi wangaphambili
Ngokuvamile ngemva kokuhlukaniswa, lona wesifazane uhlala yedwa nezikhalo zakhe nezimpikiswano. Ungasebenzisa amahora noma amahora ekhanda lalabo noma ezinye izikhathi, uthola ukuziphatha komuntu wangaphambili ukwehluleka okusha nokuningi. Futhi ukuthi ngezinye izikhathi ufuna ukuyihlambalaza, khumbula ukuthi wayengaziphathi kahle kanjani futhi u-poddet phambi kobuhlobo bakho bobabili. Kodwa uma uthi, ngeke uzizwe ukwaneliseka okulindelekile, kodwa uzihlazise emehlweni abanye. Njengoba wazi: ubuhlobo bunqunywa umuntu okhathalelayo. Ngisho noma amanxeba asesanda kutholakala, gcina uqobo futhi ukhumbule ukuthi ukuthandana kwakho nale ndoda kuyiphepha elivinjiwe elingabizi umzuzu wesikhathi sakho.
Ungasinda kanjani isehlukaniso?
Iyini inzondo yakhe emva kwehlukaniso?
Ungayithola kanjani isehlukaniso uma kukhona ingane?
Ubuhlobo bomshado bomshado ngesikhathi sokuqhafaza
Indlela yokuqeda ukuhlukunyezwa kwengqondo ngemuva kwesahlukaniso
Amakhadi okubingelela kusukela ngo-Mashi 8, 2018 - amaqoqo ngokubhalwe phansi nezinkondlo
Ukwakheka kwekhanda lomshado ekhaya
Ukunakekela i-yucca ekhaya
Ukuhlafuna i-gum: izinzuzo zayo nokulimala
Yini ekulindeleke ukuba i-Pisces ngo-2014
I-Rye buns ne-anyanisi
Iresiphi ehlongozwayo yaseFrance: i-danu ovuniwe nge-ovini nama-oranges
Ingane ikhuluma ephusheni
U-Dmitry Shepelev okokuqala ukhulume ngokuxabana nobaba kaZhanna Friske (ividiyo)
Amantombazane emphakathini wakho akakwazi ukugwema ukuba yedwa
U-Anna Kasterova - uphawu oluhamba phambili nolwebulili lwesiteshi se-TV "i-Russia -2"
I-Prostokvasha nokusetshenziswa kwayo ekhaya
I-jeans emhlophe - isitayela se-spring-stylish-2017